Dalladda Sonsaf Oo Tababr U Furtay Garabyada Haweenka Ee Xisbiyada Qaranka – SONSAF
Dalladda Sonsaf Oo Tababr U Furtay Garabyada Haweenka Ee Xisbiyada Qaranka
Dalladda Ururrada Bulshada rayidka ah ee SONSAF ayaa Kulan u qabatay garabyada haweenka ee saddexda Xisbi Qaran kulankan ayaa ahaa mid haweenka lagu tababrayay xeerarka doorashooyinka iyo habraacyada dawladnimo. Waxaana kulankaa ka soo qayb galay masuuliyiinta garabyada haweenka ee xisbiyada UCID, Waddani iyo Kulmiye
Waxaana ugu horrayn halkaa ka hadlay guddoomiyaha dalladda SONSAF mudane Anwar cabdiraxmaan warsame isaga oo ku dheeraaday kaalinta dumarku ka soo qayb qaateen dib u dhiskii dalka iyo ta ay illaa maanta kaga jiraan dhismaha qoyska iyo bulshada. Guddoomiyuhu waxa kale oo dul maray muhiimadda kulankani leeyahay iyo sida ay dalladda SONSAF uga go’an tahay inay garab istaagaan haweenka gaar ahaan kuwa u hanqal taagaya inay talada dalka ka qayb qaataan.
Waxa isaguna halkaa ka hadlay Maxamed XUseen Ciise oo ka mid ah masuuliyiinta xisbiga UCID, isaga oo tilmaamay sida xisbiga UCID wakhtigii doorashada uu sharraxay 10 dumar ah doorashada danbena ay ka sii badani doonaan haddii Alleh yidhaahdo. Waxa iyagauna halkaa hadallo kala duwan ka jeediyay dubno ku hadlayay magaca garabyada haweenka ee xisbiyada.
Kulankan loo qabtay garabyada haweenka ee xisbiyada qaranka oo socon doona muddo laba cisho ah iyada oo lagu tababari doono xeeerarka doorashooyinka iyo habraacyada dawladnimo.